HomeAfaan Oromoo‘Rakkoo osoo furmaata hin argatiin bubbuletu haala amma Oromiyaa keessa jiru dhale’-Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa
BBC Afaan Oromoo | Guraandhala 14, 2021
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi Barreessaa Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa
“Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran. Waan kana amma duras irra deddeebi’ee dubbadheera,” jedhan.
“Gamtaan Abbootii Gadaa waan Sirna Gadaa irratti hojjechaatuma jirra. Kan saniin ala jirummoo Gadaan xurii hin jaalattu; jeequmsa hin jaalattu tokkummaa malee.
Kana furuufimmoo karaa hariiroo mootummaa fi uummataa, rakkoon akka furamu gochuurratti hagas mara hojjechuu hin dandeenye,” jedhan.
Hidhamtoota nyaata lagatan akka nyaatan gaafachuufis Abbootii Gadaa keessatti garaagarummaan yaadaa waan uumameef osoo walii hin galin hafuus dubbatan.
“Gaafa Kitaabni Alii Birraa eebbifamu sana Abbootiin Gadaa muraasni walgeenyee akkaataa waan kana gidduu seennu irratti yaada kaasnee mari’anne. Ciisnee uffata afneetuma kadhanna jedhee yaada kaasefiin ture. Yaanni kun fudhatama hin arganne,” jedhan.
Yaadni Abbaan Gadaa Tuulamaafi Barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa kun maaliif Abbootii Gadaa biroo biratti hin fudhatamiin hafe kan jedhu gaafachuuf bilbilli dursaafi itti-aanaa Gamtaa Abbootii Gamtaaa Oromootti bilbille yeroof hin milkoofne.
Dhimma uummata Oromoo kan gartuu lamatti qoodamee jiru jidduutti Abbootiin Gadaa gahee keenya baanee furmaata akka argatu gochuuf rakkannee jirras jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
“Uummata Oromoo kan garanaafi gamas walqoode gidduu dhaabbattee dubbachuu baayyee ulfaata. Nu uummata Oromoo bal’aatu nu faana hiriiree jira waan ta’eef gara tokko qabachuu hin dandeenyu. Kana kana rakkanne nuuf hubadhaa,” jedhan.